Ukuthatha kwesimanjemanje ku-Classic Kiwi Bach. - I-Airbnb
Ukuthatha kwesimanjemanje ku-Classic Kiwi Bach.
Inketho ekahle kakhulu yokushaywa wumoya kulandela imikhawulo yakamuva yokukhiya.
Ukuthatha kwesimanjemanje kwe- 'Kiwi Bach', leli khaya leholide lilungele amaqembu amancane noma imindeni, elinamakamelo okulala angu-2 kanye nendawo yokuhlala evulekile, indawo yokudlela nekhishi elinemihlobiso yesimanje, ifenisha, ukukhempa okuphindwe kabili, ukushisa kanye ne-wifi. Leli khaya leholide liphakathi nemisebenzi eminingi emihle, izindawo zokuhamba ngezinyawo, amapaki kanye nezindawo eziningi ezinhle zokudlela ze-kiwi e-Foxton Beach.
Ngokusekelwe ku-kiwi bach yendabuko, indlu yabhekana nemibono ebanzi yesimanje ngasekupheleni kuka-2000, yengeza ukunethezeka kanye nokukhempa okuphindwe kabili, futhi sisanda kuba nempompi yokushisa efakiwe ukukugcina ufudumele ebusika futhi upholile ehlobo.
I-Bach ihlanganisa umbhede weNdlovukazi ekamelweni eliyinhloko, kanye nombhede oyisitezi ekamelweni lesibili onombhede olala abantu ababili phansi kanye nomunye phezulu. Kukhona nombhede ogoqwayo wesofa egunjini lokuphumula wezivakashi ezengeziwe. Amashidi, ama-duvets, imicamelo namathawula anikezwa zonke izivakashi.
Kubiyelwe kahle izilwane ezifuywayo nezingane.
4.88 · 109 okushiwo abanye
Ukuhambahamba okufushane ukuya e-White Sungura Cafe ethandwayo nokuwina inhlanzi ka-Mnumzane Grumpy kanye nama-chips kokubili okwenza ongakhetha kukho kokudla okungabandakanyiwe.
Sishiyela izivakashi zethu njengoba sihlala ngaphandle kwedolobha, kodwa sinosizo lwasendaweni olutholakalayo uma kudingeka.